एकातिर कोरोना अर्कोतिर राजनीति | परिसंवाद
एकातिर कोरोना अर्कोतिर राजनीति
गोविन्द पोखरेल	 आइतबार, चैत्र २३, २०७६ मा प्रकाशित
आउनुहोस् । यता भित्रै बसौं । पहिला साबुन पानीले मिचि मिचि राम्रोसँग हात धुनुहोस् । अनि अलि परै बसेर समाचारहरु हेर्नुहोस् । कोरोना भाइरस, लकडाउन, मृत्यु, अस्पताल र त्रासदीका बाहेक अरु समाचार पढौं । नेकपा, नेपाली काँग्रेस र अन्य दलहरु के गर्दै छन् ? के भन्दै छन् । हेरौं है त !
नेकपामा आपसमा भाँडभैलो सँगै भित्रभित्रै आगो सल्किएको छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अप्रत्यक्ष रुपमा समाप्त पार्न खोज्दै छ । कम्युनिष्टहरुलाई अरुले होइन आफ्नैले समाप्त पार्छन् भन्ने भनाई चरितार्थ पार्दै छन् । नेकपा भित्रका सरकारमा नभएका नेता वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्दै छन् । र, प्रधानमन्त्रीलाई एक्लो बनाएर घुँडा टेकाउन खोज्दैछन् ।
नेकपामा यस्तो नहुनु पर्ने । तर तपाई हामीले भनेर नहुने । हुन चाहिँ यस्तै भई रहेको छ । एमाले र माओवादी सर्लक्क आ–आफ्नो खेमातिर फर्किएर बस्छन् । अर्कोतिर मुन्टो बटारेपछि कस्को के लाग्छ । तपार्इंहरु भन्नु होला भ्रष्टाचारको कुरो काँग्रेस अथवा कर्मचारीले निकालेको होला भनेर ! होइन, सरकार बाहिर रहेका नेकपाकै नेताहरुले बजार हल्ला गरेका हुन ।
हेर्नुहोस् त ! चाइनाबाट बल्लबल्ल ल्याएको सामानलाई पनि गुणस्तरहिन भनेर लेख्न लगाए । अब त्यही सामान डबल दाममा किनेर अमेरीकाले लग्यो अरे । नेपाल भने आफ्नो जिउमा लागेको धुलो टकटक्याउँदै बसेको छ । आफ्नो पकेटको ब्यापारीले सामान ल्याएको भए यिनीहरु दशैं मनाउने थिए । अर्काले ल्याएपछि सरकारको विरोध नगरे के भद्रो हेरेर बस्छन् त !
गजबको पार्टी बनेको छ नेकपा । रबर जस्तो । एकातिर तानेर छोड्यो अर्कातिर मर्ने गरी आफैंलाई लाग्ने । यसका नेताहरुले एकता गर्दा पृथ्वीमा स्वर्ग ओर्लिने जस्तो गरेर आकासतिर उफ्रिएका थिए, तर तल झर्दाखेरि आ–आफ्नै भुइँमा टेक्न पुगे । बस् वास्तविकता यस्तै छ ।
यता नेपाली काँग्रेसबाट झन् गजब गजबको खबर आउँदै छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नगर्न वर्तमान मन्त्रीहरुलाई अनुरोध गर्नु भएछ । धेरैले आफ्नो कमेन्टमा ‘देउवाले पनि भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरे’ भनेर मजाक उडाए । हुन सक्छ देउवाले इमान्दारी पूर्वक नै भन्नु भएको थियो होला । तर, समुदायले त्यति रुचाएन ।
नर्सिङ पेशाप्रति राज्य स्तरबाटै भइरहेको विभेदको अन्त्य कहिले?
विचरा सम्पादक सरहरु कता हराउनु भो !
आइतबार, भदौ २७, २०७८
उहाँ फटाहा हुनुहुन्छ
शनिबार, भदौ २६, २०७८
स्वास्थ्य शिक्षाको वर्तमान नीति र नर्सिङ शिक्षामा पर्ने सम्भावित…
शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
हाहाss उखाने भन्दा, हाम्रै गु खाने ठिक
आइतबार, भदौ २०, २०७८
रामचन्द्र पौडेलजीले ब्यक्त गर्नु भएको विचार सुन्नेहरुले त उहाँको धज्जी नै उडाए । पौडेलजीले अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको मिलिजुली सरकार नै हो भन्नु भएछ । उहाँलाई यही बेलामा घाचाकघुचुक गर्न पाए मन्त्रीबन्न पाई हालिन्छ कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । सायद पौडेलजीले यो सरकारलाई जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका छन् भन्ने कुरा विर्सनु भयो होला ।
ए बाबा ! मान्छेले बोल्न पनि नपाउनु ! उहाँलाई एक दुई वर्ष भए पनि मन्त्री बनेर फरर झण्डा हल्लाएर हिड्ने रहर भयो होला । रहर पनि गर्न नपाउनु ।
भयो यो कुरा धेरै नगरौं । बरु तनहुँको पौडेल गाउँबाट नुवाकोटको महत गाउँतिर जाउँ । हेर्नुहोस् डाक्टर प्रकाशशरण महतले भनेकै कुरा ठिक होला । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्नु भएन । बरु पौडेलजीलाई दह्रो जवाफ दिने इच्छाले मध्यावधि चुनावको माग गर्नु भयो । उहाँलाई मध्यावधि चुनाव भए पुग्ने रहेछ । मान्छेमा कल्पना हुन्छ, चाहना हुन्छ, विश्वास हुन्छ, प्रतिशोधको भावना हुन्छ ।
प्रकाशशरणजीमा त्यही गुम्फित इच्छा प्रकट भएको हो र रामचन्द्रजीलाई जवाफ पनि हो । नेपाली काँग्रेसमा पनि गुट, उपगुट, सहगुट र हाँगाविँगा नेकपामा जत्तिकै फष्टाएको छ । नेकाका युवा नेताहरु पाका नेताहरुको अनुहारमा लागेको हिलो धोई पोखाली गर्नमै ब्यस्त रहनु पर्ने अवस्था छ ।
एकातिर विश्व नै कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ अर्को तर्फ हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीहरु आपसमा मारामार गर्दै छन् । सायद अहिले नेपाल बाहेक विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राजनीति मुद्दा उठीरहेका छैनन् । यो त्रासदीपूर्ण समयमा राजनीतिक मुद्दा उठाउनु भनेको बेमौसमी बाजा हुन जान्छ । तर, पनि त्यो बाजा बज्दै छ ।
कोरोना विरुद्ध अहिले विश्व नै मिलेर लड्नु पर्ने भएको छ । ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने अवस्था छैन । यो सरकारले पनि ‘कुकुर भुक्तै गर्छ, हात्ती लम्किदै गर्छ’ भनेर हेलचेक्राइ गर्न पाउँदैन । जसले जे गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न कोरोना भाइरस नियन्त्रण पछि प्रसस्त समय छ । त्यस बेला नेकपा टुक्रिए पनि हुन्छ, काँग्रेस उफ्रिए पनि हुन्छ । अहिले भने आउनुहोस् कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा आ–आफ्नो ठाउँबाट जुटौं ।
लक डाउन, पट्यारिला दिन र सितारको झङ्कार
जीवन ज्युँने कला
स्वास्थ्य शिक्षाको वर्तमान नीति र नर्सिङ शिक्षामा पर्ने सम्भावित असरहरु
तिलस्मी राष्ट्रकविको सम्झना
कृषि क्षेत्रमा नवज्ञान प्रयोगको परिदृश्य
चन्द्रागिरीको यात्रा, हाँडी गाउँको जात्रा!
जागीर वयष्क भएपछि
नर्सिङ पेशाप्रति राज्य स्तरबाटै भइरहेको विभेदको अन्त्य…
स्वास्थ्य शिक्षाको वर्तमान नीति र नर्सिङ शिक्षामा पर्ने…
अघिल्लो	पछिल्लो 1 of 162